gvSIG: Qalabka 21 CAD - Gofumed
Nofeembar, 2009 GvSIG, Microstation-Bentley
Barnaamijyo badan oo ka mid ah barnaamijyada ay ka mid yihiin "GIS" ayaa ah inay xaddidan yihiin inay xog ka dhistaan ​​fududaynta qalabka CAD-ga. Wax yar oo yaraanta farqiga waa la yareeyey, inkasta oo la is waydiin karo inay tahay GIS oo hagaajiyay awoodiisa dhismaha ama CAD oo fuliyey qaabab kala duwan sida Bentley Map iyo AutoCAD Map.
gvSIG 1.9 ayaa ku dhawaad ​​macneheedu ahaa nuqulkii ugu badnaa ee loo adeegsaday qalabka AutoCAD, xitaa marka loo eego qaabka xariiqda qoraalka ugu yaraan ugu amartay 21. The lagu calaamadiyay casaan waa war ka mid ah mid deggan 1.9, kuma aysan darin kuwa nuqulkan ku jira ee ku haya barmaamijka daabacan, oo u muuqda inuu yahay xulasho.
26 Block Block
28 Is barbardhig
29 La sii wado
30 Dheeraad ah
Marka hore 14 (1 ilaa 14) ayaa ku jiray liistadayda 25 badi amarrada la isticmaalo.
Qaar ka mid ah maahan sida saxda ah, sida:
- bedel vertex / pedit
-autrovolley / xadka
Kuwa soo socda 8 (15 ilaa 22) ayaa isku xidhay gvSIG, inkastoo aysan ku jirin liiska mudnaanta.
9 ugu dambeysay (23 ilaa 31) ayaa ku jiray liistadayda mana aanan ka fikirin gvSIG. Aan aragno in intooda badani aanay macno samayn GIS sababtoo ah waxay yihiin sifooyin shay, tusaale ahaan:
Waxaa loo tixgelin karaa kaalin muhiim ah ee gvSIG si ay u dhexgeliso qalab taxane ah, iyadoo la adeegsanayo caqli-galka shaqada ee AutoCAD. Ficil ahaan waxaan arkey farsamoyaqaan ku dhisay qalabkan, inkasta oo qaar badan oo ka mid ah sahanada cadadku ay doorbidaan inay la shaqeeyaan qalab CAD ah, abuur dhoowlaha ka dibna u keen gvSIG; Dadka intooda badani waxay ii sheegaan in ay tahay sababta oo ah Java marwalba wuu shaqeynayaa.
Dhanka kale, dayactirka cadastoolka, mar marka hore loo soo gudbiyo PostGis, macno maaha in la soo saaro xogta laguna habeeyo qalabka CAD; ka dibna qalabkani wuxuu noqonayaa mid faa'iido leh. Inkasta oo xogta badani, isticmaalka khayraadka Java wuxuu had iyo jeer saameynayaa.
Post Previous«Previous Isticmaal midabyo hufan oo sawirro ah
Post Next Isku-dubaridka UTM ee Google EarthNext »
16 Jawaab "gvSIG: Qalabka 21 CAD"
NortonPatti35 isagu wuxuu leeyahay:
Khubaradu waxay sheeganayaan in deynta ay dadka ku caawiyaan sidii ay u noolaan lahaayeen, sababtoo ah waxay dareemayaan inay xor u yihiin inay iibsadaan waxyaabo muhiim ah. Intaa waxaa dheer, bangiyo badan ayaa siinaya amaahda ardayda oo dhan.
SUMMARY isagu wuxuu leeyahay:
Bravo !!!, haddii uu shaqeeyo. Tani waa mid aad u fiican. . . ama ku dhawaad ​​kaamil ah, ma jiraan wax qilaaf ah, waa la .ecw ah, kaakicin gol leeyahay (RASTER- guryaha> REALCE-> dhaqaajiso), barnaamijka la bilaabin xisaabinta, laakiin waa in geeddi-socodka oo weli u muuqda in ay soo afjarto.
Dhanka kale, ma helin ikhtiyaarka "u beddelo polygons dhibco ilaa", qofna ma garanayaa halka ay joogeen?
Tag, waxay u muuqataa in aad marar badan ku socoto boggan, adigoo u mahadcelinaya Diego iyo gvSIG3D xogta, waxaan xaqiijin doonaa kadibna ka faalloodi doonaa.
gvSIG3D isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan gudbinayaa xiriir la xidhiidha cayayaanka oo laga faallooday daaqadaha 7 iyo gvsig marka la isku dayayo helitaanka faylka raajada . Dhismaha cusub ee gvSIG 3D ayaa ka duuduubay maktabadaha dhibaatooyinka ku haysta 7 waxayna ku guuleysteen Vista. Horumarka ayaa wali ku jira marxaladda tijaabada, sidaas darteed jawaabcelinta bulshada waa mid aad u muhiim ah.
Iyadoo cusbooneysiintani ay ka shaqeyso win7
mmmm!, si fiican ma aanan fileyn in jawaabahan oo kale ah sida khabiir ku ah arrintan, had iyo jeer, weli waxaan ubaahanahay caawimaad, ma i caawin kartaa? wuxuu ku saabsan yahay kala soocida kormeerka iyo kormeerka aan la ilaalin. Ma jirtaa hab aad kugula soo xiriiri karto?
Hagaag, ceeb. Nasiib wacan waxa aad sameyn doontid, runtii waxaad xallisay habka loo xaliyo dhibaatada.
g!: Waa wax aan faa'iido lahayn, waxaan ku rakibay nooca SEXTANTE ee aad faallo ka bixisay halkan, laakiin ma ogaan kartid haddii ay shaqeyneyso iyo haddii kale, maxaa yeelay markii aad isku dayeyso inaad culeys ka dhigto wax kasta oo loo yaqaan 'gvig 1.9 «STABLE» si fudud oo si fudud ayaa loo qarinayaa; Waxay xiraysaa oo ku ogeysiineysaa cilad. Waa sharaf dhac in. howlo badan oo dheeri ah ayaa lagu daray barnaamijka, laakiin kuwaa waxay ahaayeen kuwa fiican joojinta shaqadooda. . .
Anigu iskuma dayin nooca gvsig 1.9 ee daaqadaha xp ama vista, laakiin iyadoo guuleysata 7, si fudud kuma bixinayso mid. MUXUU YAHAY!
Mahadsanid mahad, waxaan hadda sii daayaa oo caddayn. Dhibaatada aad sheegeyso in kugu dhacay adiga ma ahan kiiskeyga, si kastaba ha ahaatee, waxaan u mahadcelinayaa ixtiraamka.
Qaybta SEXTANTE waa in laga soo dejiyaa halkan
Waa nooca loo yaqaan '0.3.0 dhiska 1232'.
Bilowgii waxaan lahaa laba dhibaato:
Tan koowaad waa in uu soo bixi SEXTANTE bakhaar OSOR be oo kale ahaa sababtoo ah waxaan lahaa ma uninstalled version Alpha ee gvSIG 1.9 orod oo helay dib, haddii aan waa dhibaatadaada.
Waan ku raacsanahay «ERROR», haddii aad rakibto SEXTANTE, gvsig 1.9 «xasilloon» si fudud oo sawaxan onkod. Waxaan sidoo kale haystaa WIN 7
** g! Ma jiraa nooc ka mid ah SEXTANTE oo jiidaya gvsig 1.9 xasilloon, ma ii sheegi kartaa waxa ay tahay?
By habka, dhowr novelties lagu dhawaaqay in this version (1.9 deggan,) ha muuqan meel kasta.
grgrgr isagu wuxuu leeyahay:
Hagaag, waxaan ku jiraa daboolka gvsig. Waxaan ku guuldareystaa markaan gashado gvsig 1.9 joogsada joojinta waxyaabo cusub oo naftooda u dhiibaan xasilloonida !!!!
Waa inaad soo degsataa nooca SEXTANTE oo ay bulshada soo ogeysiisay. Waa inaanay guul daraysan
Barnaamijka bilaashka ah ee software kaas oo wax ka qabta cad. Aad u xiiso badan Waxaan jeclaan lahaa in qofku la shaqeeyo qalab CAD ah oo loogu talagalay dhismayaasha.
GVSIG + QALABKA WAXAA LAGA HELAA WINDOWS 7. WAXA LA YIDHI KARAA XADGUDUB DHAMMAAN.